ဇန်နဝါရီလအတွင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်: ပွဲများ, မိုးလေဝသ, ရေအပူချိန်
by အရုဏ် Henthorn
ဆောင်းရာသီမြောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားကလူချမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဖလော်ရီဒါမှတောင်ဘက်သွားလာများအတွက်ရေပန်းစားအချိန်ဖြစ်ပြီး, ဇန်နဝါရီလထဲမှာ, Sunshine ရုပ်ရှင်ပြည်နယ်မှဧည့်သည်များအိမ်မှာသူတို့ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအင်္ကျီထွက်ခွာနိုင်နှင့်ပြည်နယ်၏တစ်ဦးပေါ်နေရောင်ကိုခံစား အများအပြားကမ်းခြေဒါမှမဟုတ်တချို့တဦးတည်း-of-a-ကြင်နာဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်။
နှစ်သစ်ကူးနေ့ဇန်နဝါရီလပထမအပတ်တွင်မှတဆင့်များသောအားဖြင့် parks- ဗဟိုဖလော်ရီဒါရဲ့ဆောင်ပုဒ်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်လူအစုအဝေးမြင်လိမ့်မည် ဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားမှာတက်ရောက်သူ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်မှတဆင့်ဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်အတွင်းကနေအနည်းဆုံးလူဦးရေထူထပ်သည်နှင့်အတူတူပင်အများဆုံးကိုအခြားအဘို့စစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူ ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများနှင့်ဆွဲဆောင်မှု။
သငျသညျတာပေါ့ရှိမရှိ က Universal Orlando တွင် သို့မဟုတ် ဇန်နဝါရီလဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလား တစ်ခုကိုမျှော်လင့်သောအရာကိုသိရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖလော်ရီဒါရဲ့နေ့ခင်းဘက်အပူချိန်ကိုအလွယ်တကူအများဆုံးဧည့်သည်များအားဖြင့်သည်းခံနေကြပေမယ့်သင်ကမြောက်ဘက်ဖလော်ရီဒါသွားရောက်လည်ပတ်လျှင်, သင်နေ့ညဉ့်မပြတ်မှာဆွယ်တာအင်္ကျီထက် သာ. လေးတစ်ခုခုစဉ်အတွင်းပူနွေးသောအဝတ်ကိုမလိုအပ်ပေမည်။
ဖလော်ရီဒါရဲ့ပျော့ရာသီဥတုဆောင်းတွင်းလအတွင်းသို့ချဲ့ထွင်, ဒါပေမယ့်မြောက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဖလော်ရီဒါအတွက်တစ်လစဉ်အတွင်းအအေးအပူချိန်နှင့်ပင်များကိုနှင်းခဲအဘို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ပျမ်းမျှအပူချိန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, သင်မူကားထိုအလူကြိုက်များဖလော်ရီဒါတွင် Destinations အပေါ်ပိုပြီးတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရှာနေလျှင်, တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး store မှာဖွင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်လင့်များယူနေကြသည်။
Daytona သဲသောင်ပြင် : အမြင့် 70 ° - အနိမျ့ 47 °
ဝိန်း Fort Myers : အမြင့် 75 ° - အနိမျ့ 54 °
Jacksonville : အမြင့် 64 ° - အနိမျ့ 42 °
Key ကိုအနောက် : အမြင့် 75 ° - အနိမျ့ 65 °
မိုင်ယာမီ : အမြင့် 73 ° - အနိမျ့ 63 °
Orlando တွင် : အမြင့် 72 ° - အနိမျ့ 50 °
ပနားမားစီးတီး : အမြင့် 62 ° - အနိမျ့ 39 °
ပန်ဆာကိုလာ : အမြင့် 61 ° - အနိမျ့ 43 °
Tallahassee : အမြင့် 64 ° - အနိမျ့ 40 °
Tampa : အမြင့် 70 ° - အနိမျ့ 52 °
အနောက် Palm Beach တွင် : အမြင့် 75 ° - အနိမျ့ 57 °
တစ်ဦးဇန်နဝါရီလခရီးစဉ်တစ်ခုမှာပေါင်းဖြစ်ပါတယ် ဟာရီကိန်းရာသီ ဇွန်လ 1 နှင့်ပြည်နယ်မှတဆင့်လှိမ့်ကြောင်းမကြာခဏအအေးမိမျက်နှာစာခဲအကြမ်းဖက်ရာသီဥတုထုတ်လုပ်သည်အထိစတင်မထားဘူး။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ (West Coast) အတွက်ရေအပူချိန်မြင့်မား 50s ကနေအမြင့်ဆုံး 60 မှနေကြပါတယ်။
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ (East Coast) ဗဟိုဖလော်ရီဒါမြောက်ဘက်ကနေပျမ်းမျှအား Mid-To-မြင့်မားသော 50s ရေလောင်း။ တောင်ဘက်အဘိဓါန် West Palm Beach တွင်, မိုင်ယာမီ, နှင့် The အမြဲမြောက်ပိုင်းဖလော်ရီဒါရှိသူတို့ထက်အများအပြားဒီဂရီပူနွေးသော့ချက်များ-များမှာရန်ကမ်းခြေ။
ဇန်နဝါရီလဖြစ်ရပ်များ: အလင်းများနှင့် Pirates
သငျသညျလ၏အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဆဲအားလပ်ရက်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားအရှေ့မြောက်ဘက်ဖလော်ရီဒါသွားရောက်လည်ပတ်ဆိုရင်တော့အားလပ်ရက်အလင်းအိမ်သန်းပေါင်းများစွာတစ်ခုလုံးကိုမြို့လယ်ဧရိယာအလင်းရှိရာအမေရိကရှိရှေးအကျဆုံးမြို့, စိန့်သြဂတ်စ, ရန်ကျော်ဦးတည်စဉ်းစားပါ။ အဆိုပါ "Nights အလင်းများ၏" ပွဲတော်ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2018 မှတစ်ဆင့်နှောင်းပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလ 2017 ကနေအလုပ်လုပ်ပြီး, နှစ်ယောက်ပေါင်းသန်းကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦးများထွန်းလင်းတောက်ပစေသည်ဟုအလင်းအိမ်, မြို့လယ်ပန်းခြံများနှင့်သမိုင်းဝင် bayfront အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်ရှုပ်နေဧည့်သည်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုအထူးဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးကျော် features တွေ သစ်ကိုတစ်နှစ်သို့။
သငျသညျနည်းနည်းပိုပြီးစွန့်စား feeling နှင့်လကုန်မှာဗဟိုဖလော်ရီဒါအတွက် Tampa ဖို့ဦးတည်နေတာပါလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်သည်, ထွက်စစ်ဆေးနေထည့်သွင်းစဉ်းစား Gasparilla Pirate ပွဲတော် ။ အဆိုပါ Gasparilla Pirate ပွဲတော်တစ်ခုရာစုအဘို့, မြို့လယ် Tampa သို့ရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ ရောင်စုံဝတ်စုံပင်လယ်ဓားပြများရာပေါင်းများစွာလှေရာပေါင်းများစွာတစ်ဦးတွင်အဖွဲ့ဖြင့်လိုက်ပါသွားလျှံ Canon နှင့်ပစ္စတိုနှင့်အတူဟိုဆေး Gasparilla သင်္ဘောတမြို့, "ကျူးကျော်" ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဟိုဆေး Gaspar နှင့် (နည်းနည်းခုခံနှင့်အတူ) သည်ဘာသာရေး Krewe ဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမြို့နှင့်သင်တဦးတည်းအတွက်င်ထင်စေခြင်းငှါမယ့်ပျော်စရာ-ဖြည့်နေ့အဘို့ဖြစ်စေခြင်း, အ Parade လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စိတ်အားထက်သန်လူအစုအဝေးနှင့်အတူ trinkets နှင့် doubloons သူတို့ရဲ့ဥစ္စာဓနမျှဝေ ရုပ်ရှင်ဒစ္စနေးရဲ့ "ဟုကာရေးဘီးယန်း၏ Pirates" ၏။
ထိပ်တန်း 10 ဂေါက်သီးရိုက်သင်တန်းများမှပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ဖလော်ရီဒါအတွက် Resorts
ထိပ်တန်း 10 ကုန်ကျစရိတ်-ဖြတ်တောက်ခြင်းအားလပ်ရက်သိကောင်းစရာများ
အာရဇ် Key ကိုဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့သဘောညစာနှင့်စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံများ
ဆန်းစစ်ခြင်း: Omni Amelia ကျွန်း Plantation Resort ကို
ဖလော်ရီဒါရဲ့ငါ-10 တလျှောက်တပ် ချ.
Tarpon Springs မိုးလေဝသ
ဝယ်ယူဘို့ Phoenix မြို့နှင့်အရီဇိုးနား Maps ကို
ကီရာလာအတွက် 2018 Onam ပွဲတော်မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလမ်းညွှန်
Explore မှ 10 အကောင်းဆုံးမက္ကစီကိုစီးတီးအိမ်နီးချင်း
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရေပန်းခြံအနီး Milwaukee
Vantage Deluxe ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးသွားကုမ္ပဏီ
အဆိုပါကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Shore ရေငုပ်ခရီးဆုံးများအာလုံး
ဗာဂျီးနီးယား Foods: ဗာဂျီးနီးယားအထူးအစားအစာများ